စတီးဗန် ဟန်ဒရီ - ဝီကီပီးဒီးယား
စတီးဗန် ဂေါဒန် ဟန်ဒရီ (အင်္ဂလိပ်: Stephen Gordon Hendry) သည် စကော့လူမျိုး အဆင့်မြင့် စနူကာ ကစားသမားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်၍ လက်ရှိ ဘီဘီစီနှင့် အိုင်တီဗီ ရုပ်သံတွင် ရုပ်သံအစီရင်ခံသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ စနူကာကစားနည်းသမိုင်းတွင် အအောင်မြင်ဆုံးကစားသမားများအနက် တစ်ဦးဖြစ်ကာ ခေတ်သစ်ကာလ၌ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဆုကို ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ရရှိထားသည်။ ကမ္ဘာ့အဆင့် (၁) နေရာဖြင့် ရာသီအများစုတွင် ရရှိထားသည့် စံချိန်ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်၍ စုစုပေါင်း ကိုးကြိမ် ရရှိထားသည်။ အသက် (၂၁)တွင် ၁၉၉၀-ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဆုကိုရရှိခဲ့သဖြင့် အသက်ငယ်ဆုံး ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံစံချိန်ကို ရရှိခဲ့ကာ ထိုနှစ်မှစ၍ ယနေ့ခေတ်အထိ ထိန်းထားနိုင်သည်။
၂၀၁၁၌ ပေါလ် ဟန်တာ ပြိုင်ပွဲတွင် တွေ့ရစဉ်
(1969-01-13) ၁၃ ဇန်နဝါရီ၊ ၁၉၆၉ (အသက် ၅၁)
South Queensferry, [West Lothian, Scotland
အဆင့် (၁) (၁၉၉၀ ဧပြီ–၁၉၉၈ မေ, ၂၀၀၆ မေ–၂၀၀၇ မေ)
£ 8.97 သန်း
147: (၁၁ ကြိမ်)
၁၉၉၀၊ ၁၉၉၂၊ ၁၉၉၃၊ ၁၉၉၄၊ ၁၉၉၅၊ ၁၉၉၆၊ ၁၉၉၉
ဟန်ဒရီသည် မာစတာဆု ခြောက်ကြိမ် (ငါးကြမ်ဆက်တိုက်အပါအဝင်)နှင့် ယူကေချန်ပီယံ ငါးကြိမ် ရရှိခဲ့သည်။ သုံးထပ်ကွမ်းသရဖူ စုစုပေါင်း (၁၈) ကြိမ် ရရှိထား၍ ရော်နီ အို ဆူလစ်ဗန် တစ်ဦးသာလျှင် ၎င်းထက်သာလွန်၍ စုစုပေါင်း (၁၉)ကြိမ်ရရှိထားသည်။ တစ်ရာသီတည်းတွင် သုံးထပ်ကွမ်းသရဖူ ပြိုင်ပွဲ (ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ၊ မာစတာ၊ ယူကေ) သုံးခုစလုံးကို ရရှိနိုင်ခဲ့သော ကစားသမားသုံးဦးထဲက တစ်ဦးဖြစ်သော ဟန်ဒရီသည် ဤသို့အောင်မြင်မှုကို နှစ်ခေါက်ရရှိကာ နှစ်ကာလအားဖြင့် ၁၉၈၉-၉၀ နှင့် ၁၉၉၅-၉၆ ရာသီတို့တွင်ဖြစ်သည်။ ဆုတံဆိပ်အများဆုံးရရှိသော စံချိန်ကို (၃၆)ကြိမ်ဖြင့် ရော်နီနှင့် အတူတူ ပူတွဲပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ တစ်ချီတည်း အမှတ်များစွာ ထိုးနိုင်စွမ်းရှိသူအဖြစ် ၎င်းသည် 'တစ်ချီတည်းရာချီအမှတ်' (century break) ၇၇၅ ကြိမ်နှင့် 'တစ်ချီတည်းအမြင့်ဆုံးအမှတ်' (၁၄၇) ကို တရားဝင်အနေဖြစ့် (၁၁) ကြိမ်ရရှိထားခဲ့သည်။
'ဗြိတိသျှအင်ပါယာ၏ တော်ဝင်အဖွဲ့ဝင်' (MBE) ကို ၁၉၉၄၌ ချီးမြှင့်ခြင်းခံရ၍ ၁၉၈၇ တွင် ဘီဘီစီ၏ ၁၉၈၇ နှင့် ၁၉၉၆ တို့၌ စကော့တလန် ထူးချွန်ထင်ရှား အားကစားသမား အဖြစ် မဲပေးရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်။ ၂၀၁၂ မေလတွင် ၎င်းဆက်တိုက် (၂၇) ကြိမ်တိုင် ကစားခဲ့သော ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲ၌ ၎င်း၏ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း (၁၆) ယောက်ထဲတွင် ၂၃ နှစ်ကြာကြာ ပါဝင်ခဲ့သည့် စံချိန်ကို အဆုံးသတ်စေခဲ့ရင်း အားကစားလောကမှ အနားယူမည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။
↑ Stephen 'The Golden Boy' Hendry။ WSC Real (2009)။
↑ Round-up: Walden waltzes into quarters။ Eurosport AU (25 September 2010)။ 24 April 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 April 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hafez၊ Shamoon။ "World Snooker Championship 2012: Stephen Maguire into semis"၊ BBC Sport၊ 1 May 2012။5July 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on5July 2012။
↑ The Greatest။ World Snooker။ World Professional Billiards and Snooker Association (2 May 2012)။
↑ Stephen Hendry retires after World Snooker Championship defeat။ BBC Sport။
↑ Stephen Hendry Archived7July 2017 at the Wayback Machine.. Biography at biogs.com.
↑ Dee၊ John (6 May 2003)။ Snooker: Williams clinches thriller။ The Daily Telegraph။ 12 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Curtis၊ John (6 May 2003)။ Article: Snooker: Williams makes itatriple crown။ The News Letter (archived on Questia Online Library)။ 19 January 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။(အသင်းဝင်ရန် လိုအပ်သည်။)
↑ Sensational Hendry Scores. 147။ World Professional Billiards and Snooker Association။ 23 April 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 April 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ BBC SPORT - SNOOKER - Stephen Hendry MBE။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စတီးဗန်_ဟန်ဒရီ&oldid=524031" မှ ရယူရန်
၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၁၈:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၁၈:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။